isivumelwano: ivuliwe i-samsung galaxy s6 (t-mobile, at & t) ngoku ixabisa i $ 399 kwi-ebay
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Kuvulwe i-Samsung Galaxy S6 (T-Mobile, AT & T) ngoku ixabisa i $ 399 kwi-eBay
Nangona i-Samsung Galaxy S6 iza kuba nonyaka omnye ubudala, kwaye yenye yezona smartphones zinamandla okwangoku kwimarike- ngakumbi ukuba awukhangeli izixhobo eziphathwayo ezinkulu. Kungenxa yoko le nto ii-apos zisothusile ukubona ukuba i-S6 ngoku inokuthengwa ngeedola ezingama-399 kuphela, zivuliwe, zintsha kraca nge-eBay.
I-399 yeedola S6 inokuthunyelwa kuphela e-US. I-apos s 32 GB T-Mobile eyahlukileyo, kodwa, kuba ivuliwe, awunakuba nangxaki ukuyisebenzisa kwi-AT & T ukuba unqwenela. Isithembiso siyakuphela ngeentsuku ezisi-7, ke kukho ixesha elininzi lokuba uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukuchitha i $ 400 kule fowuni ye-Samsung (ngaphandle kokuba, ewe, izinto ziphelile ngaphambi kwezo ntsuku zisixhenxe- umthengisi ukhankanya ukuba ' ubungakanani 'bukhona, sele zithengisile iiyunithi ezingama-80).
Ayiloxesha lokuqala xa i-Galaxy S6 isaphulelo kwi-eBay, kodwa ixabiso langoku le- $ 399 lelona liphantsi ukuza kuthi ga ngoku.
Esinye isivumelwano onokuba nomdla kuso sinxulumene neVerizon kunye neapos s Samsung Galaxy S6 Edge 128 GB. Oku kunokuthengwa nge- $ 599.99 kwisivumelwano esisecaleni (ifowuni ihlala ixabisa i $ 899). Zombini izivumelwano ze-S6 kunye ne-Galaxy S6 zinokufikeleleka ngokusebenzisa amakhonkco emithombo engezantsi.
imvelaphi: eBay ( Isivumelwano seGalaxy S6 , Isivumelwano se-Galaxy S6 ) nge Ubomi beDroid
Akukho sihluzi sogaxekile kumnyele we-s6
I-Apple iPhone 11 Pro kunye noPhononongo lwePro Max
Ukuvavanywa kokutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-iPhone 11 Pro Max: UNGAYisebenzisi ukuba ufuna isantya
Ungayidubula njani iividiyo ezingama-240fps ezicothayo nge-Apple iPhone 6
IGoogle ngoku iza kukubonisa izikhululo zerhasi kwindlela yakho
Ixabiso elitsha lePad Pro 2018 kunye nokulindelwa komhla wokulindelwa